हामीसँग केन्द्रले कुनै समन्वय नै नगरी काम गरेकोले धेरै दुःख लाग्छ : मेयर बालकृष्ण आचार्य
बुधबार, वैशाख ८, २०७८ १०:३९:३६ Wednesday, 21 April, 2021
वि.सं. २०२६ सालमा जन्मेर २०४१ सालमा अनेरास्ववियुको जिल्ला कमिटि सदस्य भई वामपन्थी विचार धारामा शुरुदेखि निरन्तर समर्पित हुँदै कुनै नेताबाट भन्दापनि राम्रो विचार नीतिबाट प्रभावित हुनुमा गर्व गर्ने र जनताको उन्मुक्ति उत्पीडन र जनजातीको उत्थानका लागि लडेर स्थानीय निर्वाचनमा धुनीबेँसी नगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित बालकृष्ण आचार्यसँग प्रज्ज्वल घिमिरेले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश यहाँ प्रस्तुत छ।
राजनीति गर्नु भनेको कस्तो काम जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
राजनीति गर्नु भनेको नितान्त सामाजिक काम भएकोले यो निस्वार्थ ढङ्गले गरिनु पर्छ किनभने सबैको हक र अधिकार अनि हितका लागि राजनीतिज्ञले लड्न सक्नु नै उसको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । स्वच्छ ढंगले सबैको भलाईका लागि आफूलाई समर्पित गर्नु नै राजनीतिज्ञको प्रमुख उद्देश्य हुनु पर्छ।
नेपालमा अहिले हरेक कुरामा अस्वच्छ राजनीति हुने भएकोले चारैतिर समस्या देखिएको हो ?
सामाजिक कामलाई राजनीतिज्ञहरुले पेसाको रुपमा लिएकोले अहिले चारैतिर समस्या देखिएको हो । सर्बत्र विकृति र विसंगतिले जरा गाडेको कारण पनि यहि नै हो । राजनीति गर्नेहरुले समाजको रुपान्तरण भन्दापनि आफ्नो परिवार कसरी पाल्ने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या देखिएको हो।
राजनीतिज्ञहरुका कारण नेपालमा के हुनु पथ्र्यो ? के भएन ?
राजनीतिज्ञहरुले समाजका लागि नसोचेर आफू र आफ्ना परिवारका लागि मात्र सोचेकाले हामी जस्तो निष्ठाको राजनीति गर्ने स्वच्छ छविका मानिसहरुलाई दुखी तुल्याएको छ । मैले अघि नै भने राजनीति भनेको सामाजिक सेवा हो । मानवताको पर्याय हो । दीन दुखीको पीडा हटाउँने माध्यम पनि हो। तर दुखको कुरा त्यसो हुन सकेन ।
राजनीतिज्ञहरुमाथि गुनासो गर्नु हुन्छ आफ्नो नगरपालिकामा तपाईले पद वहाली गरेपछि मुख्य मुख्य कामहरु के के गर्नु भयो ?
सर्बप्रथम म तपाईलाई यो नगरपालिको परिचयात्मक विवरण दिन्छु । धुनीबेसी नगरपालिका सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका हो। यो तीन वटा गाउँविकास समिति मिलेर बनेको नगरपालिका हो । अहिले हामीले यहाँ पहिलेको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, कृषि, पर्यटन हरेक क्षेत्रमा सफलतापूर्वक काम गरिरहेका छौ । अहिले एक घर एक धाराको नीति कार्यान्वयन गरी सबैलाई पानी सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराएका छौ। वर्थिङ्ग सेन्टरमा बच्चा र आमालाई आबश्यकता पर्ने सबै कुरा उपलब्ध गराएका छौ । एमबुलेन्सहरु पनि आबश्यकता अनुसार थपेका छौं। ल्याबको व्यवस्था पनि गरेका छौ । त्यस्तै कृषि प्राविधिक विद्यालयको काम पनि भइरहेको छ । धेरै समय हिडेर विद्यालय जानु पर्ने अबस्थाबाट राहत दिन केहि विद्यार्थीहरुलाई आवासिय विद्यालयको व्यवस्था पनि गरेका छौ । जर्मनी टेक्नोलोजीबाट प्राविधिक विद्यालय चालु भइसकेको छ । खेलमैदान बन्दैछ। बृद्ध बृद्धाहरुका लागि नर्शिङ सेवा सहितको भवन निर्माण हुदैछ । आगामी दशैबाट उक्त भवनको उद्घाटन हुनेछ । हाम्रा नगरपालिकामा जन्मदेखि मृत्युसम्म कसैले पनि अपहेलित हुन नपर्ने गरी काम हुँदैछ ।
आफ्नो नगरपालिका के काम गर्न नपाएकोमा तपाईलाई दुख लागेको छ ? त्यस्तो काम केही छ ?
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान बनाउँने इच्छा छ । हाम्रो नगरपालिकामा चारैतिरबाट फोहोर फालिन्छ। त्यसैले सबैको स्वास्थ्य बीमा गराउँने इच्छा छ। फोहोरको गन्ध हटाउँनलाई केही गर्न सकेको छैन । पुल, सडक, पार्कको व्यवस्था गर्ने इच्छा छ। तर के गर्ने हामीले यिनै कुराहरुबाट चिन्तित भइरहँदा केन्द्रबाट कुनै सुनुवाई नहुनुले मलाई रातदिन पिरोल्छ । हामीसँग केन्द्रले कुनै समन्वय नै नगरी काम गरेकोले धेरै दुःख लाग्छ।
यस्तो परिस्थितिमा भविष्यमा उक्त कामहरु गर्नका लागि हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ ?
कर्मलाई धर्म मानेर सबै काम गर्छु । सुनुवाई नभएर मात्र हो । नत्र हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौं । व्यवस्थित सीटी बनाएर गहकिलो पर्यटन क्षेत्र नमूनाका रुपमा कृषि फार्म बनाउँने पनि इच्छा छ । तर के गर्ने हाम्रो प्रस्तावको केन्द्रले वास्तै गर्दैन । स्थानिय सरकारको महत्व र औचित्यलाई केन्द्रले बुझिदियो भने हामी हाम्रो नगरपालिकाको उन्नतीका लागि सबै राम्रा कामहरु गर्न सफल हुनेछौ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १३, २०७७, ११:०३:००
बेथितिदेखि चित्त नबुझेर मैले राजनीति गरेको हुँ : वडा अध्यक्ष नारायण केसी
अर्थतन्त्र पुनः स्थापित हुन्छ, सबैले मेहनत गरौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
चलचित्रको विषयबस्तुको गहनतालाई हेरी सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ : निर्देशक महर्जन
शनिबार, माघ १७, २०७७ News Missile
शनिबार, कात्तिक १५, २०७७ News Missile
शनिबार, कात्तिक ८, २०७७ News Missile
शुक्रबार, भदौ १२, २०७७ News Missile
नेपाल टेलिकम सय वर्षभन्दा बढी लामो इतिहास भएको सरकारी कम्पनी भएकाले यो सबैभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। ... पुरा पढ्नुहोस्